दाङमा ‘यौ’न स’म्पर्क गर्दा गर्दै २७ वर्षका युवकको लिं,ग भाचिएपछी . . . (भिडियो सहित) – चितवन मिडिया
काठमाडौ । दाङमा एउटा अनौठो घ’टना भएको छ । एक जना २७ वर्षका युवकको सम्पर्क राख्दै गर्दा गोप्य अंङ भाँ’चि’एपछि सफल श’ल्यकृया गरिएको छ । मध्यरातमा श्रीमतीसंग सम्पर्क राखेका पुरुषलाई यस्तो घ’टना भएको हो । ति युवकको दाङको तुलसीपुर सिटि हस्पिटलमा सफल श’ल्यकृया गरिएको छ । राति करिब ३ वजे तिर अस्पताल आएका उनको श’ल्यकृया गरिएको हो । अहिले उनको सफल स’ल्यकृया पछि स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्
डाक्टरको श’ल्यकृया गरेका चिकित्सकले यस्तो घ’टना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुलाएका छन् । अस्वभावीक आसनमा सम्बन्ध गर्दा यस्तो सम’स्या आउने चिकित्कसकले जनाएका छन् । यस्तो घ’टना निकै विरलै हुने गरेको र त’त्काल उ’पचार भए निको हुने बताएका छन् । त’त्काल उप’चार नगरे त्यसले अंगमा सम’स्या आउने पनि चिकि’त्सकले सुझाएका छन् । त्यस्तो कुनै स’मस्या आए ला’जका कारण चिकित्सकसंग सल्लाह नगरे अन्य स’मस्या आउने बताएका छन् ।
नेपालमा यस्ता घ’टना निकै बिरलै भएको चिकित्सकले बताएका छन् । अस्पतालमा निकै स’म्बेदनशिल अव’स्थामा श’ल्यकृया गरिएको र त्यो सफल भएको बताएका छन् । त’त्काल श’ल्यकृया नगरिए त्यसले अन्य पिसाव नलिमा पनि असर गर्न सक्ने भ’एकाले तत्काल अस्पताल पुग्नुपर्ने बताएका छन् । चिकित्कसले सम्बन्धको पोजिशनमा सा’वधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य कुनै औषधी खाएर पनि सम्बन्ध राख्दा स’मस्या आउनस’क्ने पनि चिकित्सकको भनाई छ । चिकित्कसले शल्यकृया गरिसकेपछि उनको स्वास्थ्य अ’वस्था सामान्य हुने र जिवन पहिलाकै जस्तो अव’स्थामा आउने बताएका छन् । शल्यकृया पछि कम्तिमा ३ र ६ महिना सम्बन्ध नराख्न चिकित्कसले सुझाव दिने गरेका छन् ।
यी अंगहरुमा कोठी छ भने तपाईको हातमा पैसा कहिले पनि टिक्दैन
शास्त्रमा लेखिए अनुसार हाम्रो शरीरमा हुने कोठीको धेरै नै महत्व रहन्छ । हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंगहरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन । समुन्द्रशास्त्रका अनुसार हाम्रो श’रीरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउँबाट फरक अर्थ दिई राखे’का हुन्छन । सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ । कतिपय भागमा हुने को’ठीले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउँमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ । हाम्रो शरीरको यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको हातमा पैसा टिक्दैन हेर्नुहोस ।
२. तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ । तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने का’मुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।
३. बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चा’लु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।
४. बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ
५. चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।
७. बायाँ आँखी’भौंमा कोठी भएका ब्यक्ति पनि खर्चालु हुन्छन् । उनीहरुले विलासितामा पैसा खर्च गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।
८. बायाँ आँखा’मा कोठी हुनु पनि रो`गमा पैसा जाने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिको पैसा उपचारमा बढी खर्च हुन्छ ।